Nin cunsuri ah hooyo soomaaliyeed iyo gabadheeda ku weeraray hilib doofaar | Somaliska
Cunsuri lugu magacaabo Alex Chivers oo wejiga soo qarsaday ayaa hoooyo soomaaliyeed iyo gabadheeda ku weeraray hilib doofaar nooca loo yaqaan bacon. Ninkan ayaa markii uu falkaan geeysanaayey waxaa uu ku qeyliyey hadalo ay ka dheehan tahay naceyb ka dhan ah muslimiinta.
Ninkan oo sida muuqaal baraha bulshadda la soo dhigay ka muuuqato ayaa muujineysa sida isagoo u ordaya hooyadaas soomaaliyeed xaggeeda kaga dhuftay weji kana baxsaday goobta. Booliska magaaladda London gaar ahaan waqooyiga London oo ay dhacdadani ka dhacday ku xukumay xabsi 38 toddobaad ah. Waxaa ay sheegeen in gacan bir ah ku qaban doonaan shaqsiyaadka caadeeystay ineey falal cunsuri ah kula kacaan ajaanibta gaar ahaan muslimiinta oo ay soomaalidu ka mid tahay.
Falalka noocaan ah ayaan ku cusbeyn bulshadda soomaalida ee qurbaha u soo qaxday, dhacdadii ugu dambeeysay ayaa magaaladda Oslo ee dalka Noorweey waxaa lugu weeraray hooyo soomaaliyeed oo dhaawac u geeystay ka dib markii ay labbo nin oo cunsuriyiin ah ku dhifteen. Falalkan ayaa sidoo kale dabiici u muuqanaya tan iyo intii ay bilowdeen duufaanka naceeybka xambaarsan ee ka dhanka ah ajaanibta Yurub u soo hayaantay gaar ahaan muslimiinta.
Göteborg: Dhalinyarro loo soo qabtay falkii lugu beegsaday macbadka Yahuuda laheyd